China Grinding Steel Shot ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta ihe |Feng Erda
Alloy egweri ígwè ogbugba dabeere na elu-carbon ígwè ogbugba, obere-carbon ígwè ogbugba, na obere vanadium ígwè ogbugba, na-atụle adịghị egbu egbu nke ngwaahịa ndị dị n'elu: oghere ikuku, mgbawa, isiike iche, ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa site reasrch teknụzụ na-arụ ọrụ, ọ nwere ike họrọ ihe dị iche iche dị ka ojiji dị iche iche si dị, ọnụ ahịa ya dabere na mpaghara ngwa, nwere ike ịdị ogologo ndụ ojiji, ọ nwere arụmọrụ dị elu. , 50-55 HRC na 55-60 HRC nwere nha sitere na 0.20mm ruo 2.50mm.Mpịakọta waya anyị kpụrụ akpụ kwekọrọ na SAE J441, AMS 2431 na VDFI 8001.
Ụkpụrụ G1 kwadoro
G2 nwere ntụ oyi ugboro abụọ
Martensite ma ọ bụ troosite ma ọ bụ pearlite nwere nkwarụ
Nha dị n'ụdị, glossiness zuru oke, ụdị bọọlụ
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Alloy Grinding Shot?
Nkebi ogbugba ogbugba obe
Steel ogbugba cross ngalaba
Ngwa igwe anaghị agba nchara
Ngwa igwe gbara agba
①, Ọ na-mere nke adịgboroja ígwè waya, ọ dịghị ikuku oghere, cracks, na ike dị iche.
②, Dị ka dị iche iche chọrọ nke dị iche iche ubi, anyị nwere ike họrọ dị iche iche ihe nke ígwè waya.
③， The egweri ogbugba bụ ọzọ resilience, na ndụ bụ 1.5 ugboro nke ígwè ogbugba.
④, The workpiece kpochara site-egweri ogbugba bụ ọlaọcha-ọcha, na elu kpochara site nkedo ígwè ogbugba amama ọchịchịrị isi awọ.
⑤, The ihicha mmetụta bụ nke ọma karịa nke nkedo ígwè ogbugba, na ọ dịghị mkpa nke abụọ ihicha.Mgbe ihicha, roughness nke workpiece na-emezu ihe ndị a chọrọ.
⑥, N'ihi uru nke ọ dịghị ikuku oghere, ọ dịghị cracks, na ọ dịghị mfe na-agbajikwa na abrasive forging-egweri ígwè ogbugba, na-ejuputa ego na ịgbawa usoro bụ obere, uzuzu na-agbawa usoro bụ obere, na-arụ ọrụ ike dị ala. , na enwere ike ibelata mmetọ gburugburu ebe obibi.
Ntụle nke Uru
Igwe nchara na-egweri
Igwe ọkụ carbon dị elu
ndụ ike ọgwụgwụ
Nke gara aga: FerroSilicon
Osote: Na-ebu Angular Steel Grit